Chautari Daily » आजपनि बढ्यो विदेशी मुद्राको भाउ, हेर्नुहोस् कुन देशको कति ? (तालिकासहित)
आजपनि बढ्यो विदेशी मुद्राको भाउ, हेर्नुहोस् कुन देशको कति ? (तालिकासहित)
काठमाडौं / बुधबार पनि अमेरिकी डलरसहित अन्य केही देशको विनिमयदर बढेको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १ सय १७ रुपैयाँ ४६ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय १८ रुपैयाँ ६ पैसा तोकिएको छ । एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १ सय ५३ रुपैयाँ ७३ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय ५४ रुपैयाँ ५१ पैसा तोकिएको छ।
त्यस्तै कोरियन वन एक सयको खरिददर ९ रुपैयाँ ८८ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ९३ पैसा तोकिएको छ । एक साउदी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ ३२ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ४८ पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै एक बहराईन दिनारको खरिददर ३ सय १० रुपैयाँ ४४ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय १२ रुपैयाँ ३ पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै एक मलेसियन रिँगिटको खरिददर २८ रुपैयाँ १९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ३४ पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै एक कुवेती दिनारको खरिददर ३ सय ११ रुपैयाँ ५२ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय १३ रुपैयाँ ११ पैसा तोकिएको छ । एक कतारी रियालको खरिददर ३२ रुपैयाँ २६ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ४२ पैसा तोकिएको छ ।
प्रकाशित मिति २४ भाद्र २०७७, बुधबार ०६:३७
काठमाडौंमा बढ्दै कोरोना : आजपनि थपिए यतिधेरै संक्रमित
नेपालमा कोरोनाबाट आज एकैदिन १७ जनाको मृत्यु
नेपालमा आज थपिए १४ सय ९७ संक्रमित
अझै केहि दिन भारी वर्षा हुने, सतर्क रहन आग्रह
आजपनि ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ : तोलाको कति ? हेर्नुहोस्
स्याङ्जा पहिरोमा परी एकैघरका पाँच जनाको मृत्यु, चार जना बेपत्ता
कामदारको कार्यस्थलमा मृत्यु भए हकदारले आजिबन तलब पाउने,. (पूरा पढ्नुहोस)
स्याङ्जामा पहिरोमा पुरिएर दुई जनाको मृत्यु, आठ बेपत्ता